एसईईको नतिजा सार्वजनिक, के भयो नायिका र सांसदको नतिजा? | लगातार समाचार
Home प्रमुख समाचार एसईईको नतिजा सार्वजनिक, के भयो नायिका र सांसदको नतिजा?
एसईईको नतिजा सार्वजनिक, के भयो नायिका र सांसदको नतिजा?
१२ असार २०७६, बिहीबार १७:२०
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीमा २०७५ सालको एसईई परीक्षाको नतिजा सार्वंजनिक गर्दै परीक्षा नियन्त्रक विष्णु प्रसाद अधिकारी । तस्विर : रासस
भक्तपुर, १२ असार । यस वर्षको एसईई परीक्षामा १६ हजार ८२ ले ए प्लस ल्याएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीबार नतिजा प्रकशित गरेको हो। प्रकाशित नतिजाअनुसार ए प्लस ल्याउनेमा नौ हजार ५९६ छात्र र सात हजार २८६ छात्रा छन्।
गत चैत १० गतेदेखि सञ्चालन गरिएको एसइई परीक्षाको नतिजा बिहीबार सावर्जनिक भएको हो। परीक्षामा चार लाख ७५ हजार तीन परीक्षार्थी सहभागी थिए। नतिजाका लागि नेपाल टेलिकमका ग्राहकले १६०० मा डायल गरी प्राप्त निर्देशन अनुसार जानकारी लिन सक्नेछन्।
टेलिकम तथा एनसेलको मोबाइल प्रयोगकर्ताले १६०० मा म्यासेज गरेर पनि नतिजा थाहा पाउन सक्ने छन्। सँगै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइटमा पनि नतिजा हेर्न सकिनेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेबसाइट र नेपाल टेलिकमको वेबसाइटमा समेत नतिजा हेर्न सकिने छ।
करिश्माको बि प्लस, शान्ताको बि
यसै वर्ष एसईई परीक्षा दिएर चर्चामा रहेका दुई व्यक्तित्वको नतिजा पनि सार्वजनिक भएको छ। एसईई परिक्षा दिएकी नायिका करिष्मा मानन्धरले बि प्लस ग्रेड ल्याएकी छन् भने सांसद् शान्ता चौधरीको बि ग्रेड आएको छ।
नतिजा प्रकाशित भएका सबै परिक्षार्थीहरूलाई लगातार न्यूज टीमको तर्फबाट हार्दिक बधाई एवम् उज्जवल भविष्यको लागि हार्दिक शुभकामना।
रिलायन्स लाइफको सम्पर्क केन्द्र सञ्चालनमा